DLULA MAHHALA La Rochelle - Île De Ré LFBH FSX & FSX Steam - Rikoooo
ULa Rochelle - u-Île De Ré LFBH FSX & FSX I-Steam Version 3.0
Usayizi 64.7 MB
Play 28 624
Umbhali: Alexandre REMY FAF010
I-pretty nice photoreal version version 3.0 yesibhuloho saseLa Rochelle eFrance (I-LFBH) kanye nokuzungezile. Faka ibhuloho ye-Ile de Ré, enebude bamamitha angu-2926.5. Izakhiwo zenziwe ngaphansi kwe-GMAX elungiselelwe ukwenza indawo ibe lula ngokusemandleni. Ukuqaphela ngokukhethekile ama-FPS kwenziwa! Abasebenzi basemhlabathini bavuthwa, ngakho-ke ngeke umangale ukubona abantu behamba nge-tarmac. Isikhumulo sezindiza sikhiqizwa kahle.
I-Airport yaseRa Rochelle iyisikhumulo sezindiza evulekile emgwaqweni womoya womoya (CAP), ephakathi kwe-2.5 km enyakatho-ntshonalanga yeLa Rochelle, Charente-Maritime. Isetshenziselwa ukuthutha emoyeni (kazwelonke nakwamanye amazwe) kanye nomkhuba wokuzilibazisa nokuvakasha (ukuhamba kwezindiza jikelele)
Ukufika lapho vula umphathi wesikhumulo sezindiza ngaphakathi FSX/P3D bese ufaka le khodi I-LFBH at the ID sezindiza insimu